तस्विरमा हेर्नुहोस् वासिङ्टनमा ट्रम्पको ‘कू’ को प्रयास | Ratopati
personएजेन्सी exploreकाठमाडौं access_timeपुस २३, २०७७ chat_bubble_outline0
अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीमा रहेको क्यापिटल बिल्डिङमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका समर्थकले कब्जा गर्ने प्रयास गरेका छन् । स्थिति हिंस्रक बनेपछि बुधबार बेलुका ६ बजेदेखि बिहीबार बिहानसम्म कर्फ्यू लागू गरिएको छ । क्यापिटल भवन, संयुक्त राज्यको संसद भवन हो ।
यस हिंस्रक प्रयासलाई राष्ट्रपति ट्रम्पले ‘कू’ को प्रयास गरेको डेमोक्रेटिकका साथै रिपलब्लिकन सांसदहरुले समेत आरोप लगाएका छन् । मिट रम्नीले ट्रम्प स्वार्थी व्यक्ति भएको बयान दिए । ट्रम्पले लगातार धाँधलीको आरोप लगाउँदै चुनावको नतिजामाथि प्रश्न उठाउँदै आएका थिए ।
डोनाल्ड ट्रम्पका समर्थकले बुधबार क्यापिटल बिल्डिङमा प्रवेश गरेर हंगामा सुरु गरिदिए । यो हंगामा त्यतिबेला भयो जब अमेरिकी कांग्रेसमा इलेक्टोरल कलेजको विषयमा बहस चलिरहेको तियो । यहाँ जो बाइडेनको चुनावी जीतको पुष्टि गरिने कार्यक्रम पनि थियो । सदनमा चलिरहेको बहसका बेला अचानक डोनल्ड ट्रम्पका समर्थक क्यापिटल बिल्डिङभित्र पुगे । यसका कारण बहस बीचमा नै रोक्नुपरेको थियो।
डोनल्ड ट्रम्पका समर्थकले चुनाव रद्द गर्ने माग गर्दै प्रदर्शन गरिरहँदा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच हिंस्रक झडप भएको थियो । स्थिती अनियन्त्रित भएपछि २७ सय नेशनल गार्डलाई क्यापिटल पठाइको छ।
द वासिङ्टन पोस्ट र सीएनएनका अनुसार झडपका क्रममा एक महिलाको मृत्यु भएको छ भने एक दर्जनभन्दा बढीलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ ।
कति मिठो यःमरी ! (तस्विरमा हेर्नुहोस्)
खाने हैन त तरुल ? (फोटोफिचर)
माइतीघरमा नौमती बाजा बजाएर विरोध प्रदर्शन (फोटोफिचर)
कपाल मुण्डन गरेर विरोध गर्ने नेविसंघका कार्यकर्ता पक्राउ
‘भक्तजनले जिस्क्याउने र देवगणले लखेट्ने’ जात्रा, तस्बिरमा हेर्नुहोस्
जङ्गी अड्डा सुरक्षा तथा व्यवस्थापन केन्द्रको उद्घाटन
सेनाको अपरेशन महाहण्ट–७ः गैंडाको खाग तस्कर समातिए
‘तिमी कसकी छोरी’मा सुरक्षाको शम्भुसँग रोमान्स
चोरीको मोटरसाइकल नम्बर प्लेट परिवर्तन गरी चलाउने पक्राउ
प्रचण्डको दावी–देशलाई निरंकुशताको ठाउँमा पुर्‍याउने डरलाग्दो षडयन्त्र भइरहेको छ